Nunavut, Canada	NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!
• (အိမ်၊ ခြံ၊ မြေလုပ်သက် ၅ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ
• အသက် 27 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ)
• ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
• ရိုးသားကြိုးစား၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
• လစာ + commission
” Applicant must be able to find new market and customer ”
Language Skill (English)
Enquiry Tel – 01-8604335
Please indicate the below information in your resume to THE RECRUITMENT.
1. Working Experience, achievement & Position
5. Last Drawn Salary
Job Categories: Real Estate / Property Management. Job Types: Contract. 202 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ